यी हुन् अहिलेसम्म ‘फिल्मफेयर’ बेस्ट एक्टरको अवार्ड नपाउने बलिउडका चर्चित स्टार - pnpkhabar.com
You are at:Home»हलिवुड/बलिवुड»यी हुन् अहिलेसम्म ‘फिल्मफेयर’ बेस्ट एक्टरको अवार्ड नपाउने बलिउडका चर्चित स्टार
यी हुन् अहिलेसम्म ‘फिल्मफेयर’ बेस्ट एक्टरको अवार्ड नपाउने बलिउडका चर्चित स्टार
By दिपेश बिष्ट on ६ जेष्ठ २०७५, आईतवार ०७:३९ हलिवुड/बलिवुड
जेठ ६, बलिउड अवार्डस्को कुरा गर्ने हो भने ‘फिल्म फेयर’ अवार्डलाई सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ । यसकोक कारण यो अवार्डको इतिहाँस बेग्लैछ । राज कपूर, दिलीप कुमार र अमिताभ बच्चन जस्ता ठूला स्टारलाई यो अवार्डद्वारा सम्मानित गरिएको छ । ५० बर्षभन्दा लामो समयदेखि यो अवार्ड निरन्तर संचालन भइरहेको छ ।
यो अवार्डकै कारण कतिपय स्टारको भाग्य चम्किएको छ । फिल्मफेयरको बेस्ट एक्टर अवार्ड पाउनु हरेक स्टारका लागि गौरवको कुरा हुन्छ । बलिउड फिल्म इन्डस्ट्रीमा केही यस्ता ठूला स्टार छन्, जसले ब्लक बस्टर फिल्म दिएका छन् । ती फिल्ममा उनीहरूको अभिनयको तारिफ गरियो । तर उनीहरूलाई फिल्मफेयरको बेस्ट एक्टरको अवार्ड भने अहिलेसम्म प्राप्त भएन ।
को हुन् ती स्टार ?
सैफ अली खान फिल्मफेयरको बेस्ट एक्टरको अवार्ड नपाउने स्टारको लिस्टमा समावेश छन् । उनी सबैखालका फिल्ममा आफ्नो अभिनयले वाहवाही कमाएका छन् । रोमान्टिक रोल होस् या भिलेनको रोल नै किन नहोस् उनले पात्रलाई न्याय गर्ने गरेका छन् । उनी फिल्‍मफेयरको एक्‍टर अवार्डका लागि दुई पटक नोमिनेट भए, तर अवार्ड भने पाएनन् ।
अक्षय बलिउडका टप एक्टर्स हुन् । उनले कमेडी, एक्शन र रोमान्टिक सबै खालका फिल्ममा काम गरेका छन् । ती भूमिकाबाट उनले बेला बेला उनको प्रशंशा समेत हुने गर्छ । तर उनलाई अहिलेसम्म फिल्‍मफेयरको बेस्‍ट एक्‍टर अवार्ड दिइएको छैन । उनी केही पटक नोमिनेट भएर पनि अवार्ड भने पाउन सकेनन् ।
सलमान खान बलिउडका ती स्टार हुन्, जसको नामले नै फिल्म हिट हुने गर्छन् । उनका फ्लप भनिएका फिल्मले पनि १०० करोड बढी कमाउने गर्छन् । उनी ३०० करोड बढी कमाउने सबैभन्दा बढी फिल्म दिने बलिउडका एकमात्रै अभिनेता हुन् । भर्खरै रिलिज भएको ‘टाइगर जिन्दा है’ यसकै उदाहरण हो । तर उनले अहिलेसम्म फिल्‍मफेयरको बेस्‍ट एक्‍टर अवार्ड पाउन सकेका छैनन् । अक्षय झैं उनी पनि केही पटक नोमिनेट भएका छन् ।
४. अजय देवगन
अजय देवगन बलिउडका यस्ता अभिनेता हुन्, जसले एक्शन, रोमान्स, कमेडी सबै किसिमको भूमिका निभाएका छन् । एक्शन फिल्ममा अजयको स्टन्ट जति शानदार हुन्छ, त्यती नै कमेडी फिल्ममा पनि उनको अभिनय तारिफ योग्य हुन्छ । उनले केही हिट फिल्म दिएका छन् । यसका बावजुल पनि उनले अहिलेसम्म फिल्मफेयरको बेस्ट एक्टरको अवार्ड पाउन सकेका छैनन् ।
एक जमना थियो, जब ठूलो पर्दामा सुनिल शेट्टीको एक्शन हेर्न मानिसहरू हलमा उभिन तयार हुन्थे । सुनिलले कमेडी फिल्ममा समेत अभिनय गरे र प्रशंसा बटुले । तर उनले फिल्म फेयरको बेस्ट एक्टर अबार्ड पाउन सकेनन् ।